Apartma PEC (Sitar) 3 - I-Airbnb
Apartments PEC (Sitar) zibekwe kwilali entle Ribnica on Pohorje, embindini welali, kanye ecaleni kwecawa.
Kwisiseko esingaphantsi kwe-200m2 kukho indawo yokuphila kakuhle ene-tub eshushu, ii-saunas ezi-4 ezahlukeneyo (i-sauna yaseFinland, i-infra sauna, i-sauna yetyuwa yaseTurkey kunye ne-bio Finnish chrome sauna), kunye nomqolomba womkhenkce. Siyalwamkela ugcino olusetyenziselwa bucala kwindawo yezempilo.
Sihamba yimizuzu nje embalwa ukusuka kwindawo yokutyibiliza kunye nemizuzu engama-20 ukusuka eRadlje ob Dravi Water Park, lelona chibi lokuqala lebhayoloji eSlovenia! Ukutyibiliza kwilizwe lonke kunokwenzeka kwithafa lasePohorje phakathi kweKope neRibniška koča.
Indawo yethu yokuhlala sisiqalo esihle kakhulu sokuhlola kunye nokufumanisa iikona ezifihlakeleyo zeRibniško Pohorje. Ungafumana ngaphezulu kwe-100 yeekhilomitha zeendlela zokuhamba eziphawulweyo nezicwangcisiweyo, uye eRibnica Lake okanye eLovrenc Lakes, okanye ukhwele iKope.
Kukho iindlela zokuhamba ngebhayisikile ezingapheliyo eziphawulweyo, ukusuka eŠtrekna, enye yezona ndlela zigcinwe kakhulu ngebhayisekile, ukuya kwibhayisekile ephantsi komhlaba phantsi kweNtaba iPeca.
Ukuphonononga kunye nokuziva ubomi bemihla ngemihla obuzolileyo babalimi baseRibniško Pohorje, ungandwendwela iFama yaseLena, apho uMakazi uLena akwazisa ngomsebenzi weFama ngelixa unxulumana nezilwanyana, ungazama isandla sakho kwimisebenzi yasefama kwaye wondle iigusha ngelixa zijikeleza kwifama yazo, zivune amayeza amayeza, amakhowa kwaye zimamele amava akhe atyebileyo.
Kukho iiflethi ezi-5 ezinobuninzi beebhedi ezingama-30 zizonke.
Amagumbi aqeshwa ngokwahlukeneyo, kwaye kuyenzeka ukuba kuqeshwe indlu yonke.
Kukho nendawo yokubhiyozela amaqela avaliweyo kwigumbi elingaphantsi.